Bakhathazekile kumiswa amatekisi | Isolezwe
Bakhathazekile kumiswa amatekisi
All content feed / 7 December 2017, 10:54am / BONISWA MOHALE
UNGQONGQOSHE wezokuThutha KwaZulu-Natal uMnuz Mxolisi Kaunda uthembise ukuthi zizoqina ezokuphepha eLadysmith njengoba kumiswe amatekisi izinyanga eziyisithupha ngenxa yodlame Isithombe: Sithunyelwe
ABANTU baseMnambithi bazwakalise ukukhathazeka ngesinqumo sikaNgqongqoshe wezokuThutha nokuPhepha koMphakathi KwaZulu-Natal, uMnuz Mxolisi Kaunda, sokumisa amatekisi kososeshini ababili iKlipriver neSizwe izinyanga eziyisithupha.
Bakhale ngokuthi bazophelelwa yimisebenzi, abanye babalisa ngokuthi amabhasi awangeni ezindaweni zabo futhi aqala ukusebenza emini.
Izolo, uKaunda umemezele ukuthi uyakumisa ukusebenza kwamatekisi kusuka namuhla. Abantu bazothuthwa ngamabhasi.
Kuzosebenza amatekisi ahamba emizileni yamabanga amade okungawososeshini ababambisene nalaba.
Kule ndawo sekube nodlame isikhathi eside kwabulawa nabantu okubalwa kubo nePhini likaSihlalo waseKlipriver uMnuz Mzikayifani Ngobese emasontweni ambalwa edlule. Kuboshwe abantu ababili ngaleli cala bavela enkantolo. Ngempelasonto edlule kubulawe abanye ababili omunye okulindeleke angcwatshwe ngempelasonto.
Abebesemhlanganweni okumenyezelwe kuwo ukuthi iyavalwa imizila basamulekele isinqumo kodwa bazwakalisa ukukhathazeka ngokuthi abazi noma labo soseshini bayasamukela yini ngoba bebengekho emhlanganweni.
“Isinqumo sikangqongqoshe sizosebenza,” kusho omunye onqabe negama lakhe.
“Siphoqa ukuthi abakulabo soseshini baxoxe ngokweqiniso bayeke lo mdlalo wekati negundane abebewudlala osudlule nemiphefumulo.
“Kuyasikhathaza ukuthi abekho emhlanganweni kodwa ngiyazi ukuthi uma sebeqala ukulamba, amatekisi abo esethathwa ngoba bengakhokhi, bazoxoxa. Ezinyangeni ezimbili bazosithola isixazululo,” kusho isakhamuzi.
Esinye isakhamuzi, uMnuz Thulasizwe Mthembu sithe sikhathazekile ngokuthi uhulumeni uzokwazi yini ukuvikela amabhasi nomphakathi ohamba ngawo.
UMnuz Sabelo Sithole onguSihlalo weNFP eMnambithi uthe uKaunda bekufanele andise amaphoyisa emarenki ngoba abantu bazophelelwa wumsebenzi kwazise amabhasi awafiki ezindaweni eziningi.
UNkk Thandi Mazibuko wasePhase 2, eRoosboom uthe kushone elayizolo amatekisi engasahambi, amabhasi ahamba kude. Uthe bazophelelwa wumsebenzi ngoba amabhasi ahamba ngezikhathi ezithile kanti amatekisi atholaka noma nini.
UKaunda uthe udlame lwamatekisi luholele ekutheni asebenzise isigaba 91 somthetho, iNational Land and Transport Act ka-2009, esimgunyaza ukuthatha izinyathelo ezinqala ukuze kube nozinzo eLadysmith.
Uthe kusuka ngo-2014 udlame lwamatekisi eMnambithi seludlule nemiphefumulo yabantu abangu-61 emizileni okusebenza kuyo iSizwe Transport neKlipriver Taxi Association.
Isolezwe like labika ngempi esidonse isikhathi eside phakathi kwemindeni esematekisini owakwaMvelase, Mabaso nowakwaGamede.
UKaunda uthe kusuka ngo-2011 uNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnuz Willies Mchunu wazama ukuluxazulula lolu daba kangangokuthi ngoFebhuwari kwaba nomcimbi wenhlambuluko kwathi ukuthula.
UKaunda uthe bazame konke ukuxazulula inkinga yodlame okuhlanganisa ukutshala amaphoyisa enkabeni yaseMnambithi naserenke yamatekisi kodwa kwanhlanga zimuka nomoya.
Uthe ezokuphepha zizobe ziqinile ukuqinisekisa ukuphepha kwabantu abagibela amabhasi.
UMnuz Sifiso Mthethwa oyiPhini likaSihlalo weSantaco KwaZulu-Natal uthe isinqumo sikaKaunda sizobashaya abanikazi bomsebenzi ngoba ukupaka kwezimoto izinya-nga eziyisithupha akuwona umdlalo.
Uthe amatekisi azodliwa ngoba abanikazi bawo ngeke babe nemali yokuwakhokhela.
“NgeSonto bekunomhlangano obubizwe ngungqongqoshe kwafika usoseshini owodwa iSizwe futhi wasamukela isinqumo sikangqongqoshe. SiyiSantaco sizohambisana nososeshini ababili uma sebezimisele ukuxoxa ngoba ukumiswa kwezimoto akusho ukuthi kufanele kuphele izinyanga eziyisithupha kodwa zingabuyela emsebenzini uma abanikazi bazo sebezimisele ukuxoxa,” kusho Mthethwa.